[solved]Router ရဲ့ vty line [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Networking Problems » [solved]Router ရဲ့ vty line [Problem]
1 [solved]Router ရဲ့ vty line [Problem] on 28th July 2010, 7:56 am
မှတ်ပုံတင်သောနေ့ : 2010-06-29
Router ကို configure လုပ်ဖို့ ....
Telnet login အတွက် vty line က0to4အထိ ၅လိုင်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်၊
ဘာအတွက် ၅ လိုင်းတောင်ရှိရတာလဲ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ သုံးသလဲဆိုတာသိချင်လို့ ....
အကိုအမများ ရှင်းပြပေးပါအုံး ......
2 Re: [solved]Router ရဲ့ vty line [Problem] on 28th July 2010, 1:06 pm
line vty 0-4 ဆိုတာ router ကို telnet ကနေ configure လုပ်ဖို့ဆိုတာမှန်ပါတယ် 0-4 ဆိုတာ တချိန်ထဲမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်ဝင်လို့ရမယ်ဆိုတာသတ်မှတ်တာပါ.
o = not allow to login with telnet
1 = 1 user can login at the same time
2 =2user can login at the same time
3....4 အဲလိုပါ အဆင်မပြေတာရှိရင်ပြောပါ ထပ်ရှင်းပြပါ့မယ်.....
3 Re: [solved]Router ရဲ့ vty line [Problem] on 30th July 2010, 5:52 am
ရွင္းပါတယ္..ကို rat ေရ၊ ဒါေပမဲ့
0=not allow to login with telnet ကို ထပ္ရွင္းျပပါအံုး
Router(conf-line)#line vty 0
ဒီလိုေပးလိုက္ရင္ ဘယ္သူမွ Telnet နဲ႕ remote login ၀င္လို႕မရဘူးလို႕ဆိုလိုတာလား?
4 Re: [solved]Router ရဲ့ vty line [Problem] on 30th July 2010, 7:57 am
line vty04 ဆိုတာ vty0ခု 1 ခု2ခု လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ Vty0to vty4စုစုပေါင်း ငါးခုရှိတာပါ။
#line vty0ဆိုလို့ vty login interface0ခုဆိုပြီး ကို disable လုပ်လိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ Telnet login allow မလုပ်ချင်လို့ vty disable လုပ်ချင်ရင် #no line vty04 ဆိုပြီး Cisco ထုံးစံအတိုင်း no ထဲ့ရိုက်ရပါတယ်။
Topic starter မေးခွန်းကိုဖြေရရင် ၊ vty ငါးခုရှိတာ connection ငါးခု တစ်ပြိုင်ထဲ ချိတ်နိုင်အောင်လို့ပါ ။ Telnet, SSH , FTP, TFTP ဒါတွေအားလုံးက vty ကိုသုံးပါတယ်။ vty interface ငါးခုပေးထားတော့ Admin တွေက မတူညီတယ့် operation ငါးခုထိ တစ်ပြိုင်ထဲ လုပ်နိုင်တာပေါ့။ Interface နှစ်ခုပဲ ထားချင်ရင်2to4ကို disable လုပ်ထားပေါ့။
Vty interface တစ်ခုကို password တစ်ခုပေးတာမျိုး လုပ်ခဲပါတယ်။ အားလုံးကိုပဲ # line vty04 ဆိုပြီး login enable လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ Authentication နဲ့ user တွေကိုခွဲချင်ရင် configuration mode လို့ခေါ်တယ့် (config)# မှာကတည်းက username / password create လုပ်ပေးခဲ့လေ့ရှိပါတယ်။
နောက်ဆုံးက login ဆိုတာက user login မှာ username / password check ဖို့ enable တာပါ။ Telnet က plain text မို့လို့ နောက်ပိုင်း ssh login ပဲခွင့်ပြုကြတာများပါတယ်။ Vty ကို SSH နဲ့ FTP ပဲ လက်ခံဖို့ configure လုပ်ကြလေ့ရှိပါတယ် ။
5 Re: [solved]Router ရဲ့ vty line [Problem] on 30th July 2010, 11:48 pm
နှစ်ယောက်လုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... [You must be registered and logged in to see this image.]
6 Re: [solved]Router ရဲ့ vty line [Problem]